Start Lock Screen v2.1.3 And Themes စုစည်းမှု ( 14MB) - .::just for share::.
Home » android » android apps » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » Start Lock Screen v2.1.3 And Themes စုစည်းမှု ( 14MB)
Start Lock Screen v2.1.3 And Themes စုစည်းမှု ( 14MB)
Android ဖုန်းတွေမှာ Smart ကျတဲ့ Lock Screen ဒီဇိုင်းလေးသုံးချင်သူတွေအတွက် Start Lock Screen v2.1.3 ဒီ Lock Screen လေးကြောင့် မိမိဖုန်းရဲ့ Lock Screen လေးကို တစ်မျိုးလေးဆန်းသစ်ပြီး လှပသွားစေမှာပါ..
ထူးခြားချက်တွေကတော့ Social Media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook , Twitter , Flicker အစရှိသည်တို့က Feeds
တွေကို Lock Screen ပေါ်မှာတင်မြင်တွေနိုင်သလို Weather Widget ,Photo Gallery , Apps စသည်တို့ကို
လည်း Lock Screen မဖွင့်ပဲအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်………………သီချင်းလေးတွေကိုလည်း Lock Screen ပေါ်ကနေပြီးထိန်းချုပ်နိုင်သေးဗျ
ဒါ့အပြင် Lock Screen Theme တွေကိုလည်း ထပ်မံပြီး ရယူနိုင်ပါသေးတယ်….တစ်ခြားထူးခြားချက်တွေက
တော့ မိမိဖာသာအသုံးပြုရင်းနဲ့ ဆက်လက်ရှုစားကြပါ…………………………………..
Themes တွေလည်းအလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်အောင် စုစည်းပေးထားပါတယ်...စမ်းသုံးကြည့်ပါ
Start Lock Screen Features…………….
Can launch up to 24 apps of your choice
Social media feeds from Facebook, Twitter, Flicker, RSS.
Launch search and photo gallery
Shows weather condition.
Switch between your phone’s sound profiles (ring/vibrate/silent)
Call, message and email notification
Access call-log from lockscreen
Choose from hundreds of themes and plugins
Start Lock Screen Theme စုစည်းမှု ( 14MB)
အလွန်းလှတဲ့ Start Lock Screen ရဲ့ Themes လေးတွေကိုစုစည်းပေးထားတာပါ…..Start Lock Screen User
ပါဝင်တဲ့ Themes တွေကတော့……………………
-Star Wars-Start Theme
-Azercell New Year-Start Theme
-Deep Sea-Start Theme
-Love Is In The Air-Start Theme
-Coffee Brake-Start Theme
-Mobile Love-Start Theme
-The Grate Wall-Start Theme
-Eiffel Tower-Start Theme